यौन र जीवन – Page5– धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
१२ करोड लगानीमा वाटर किङडम रिर्सोट सञ्चालन
घाटवेशी, - राजधानी मित्रिने र वाहिरिनेलाई आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक लक्षित गरि काठमाण्डौको ६० किलो मिटर पश्चिम धादिङको घाटवेशीमा १२ करोड लगानीमा रिर्सोट सञ्चालनमा ल्याएको छ । धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष प्रभात किरण सुवेदी सहितका ६ जना स्थानीयको लगानीमा फागु पूर्णिमा पर्वको अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश..
आज रंगहरूको पर्व फागु पूर्णिमा
आज रंगहरूको पर्व फागु पूर्णिमा अर्थात् होली । काठमाडौं उपत्यकालगायतका पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइदैछ । तराईका २३ जिल्लामा भने होली पर्व भोलि मात्र मनाइने प्रचलन रहेको छ । इच्छाविपरित जथावाभी लोला हान्ने, रंग दल्ने तथा रसायनयुक्त पदार्थ प्रहार गर्नेलाई सुरक्षा निकायले कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसैबीच होली..
कुकुरले हानेको गोली लागेर मालिक घाईते
तपाईलाई पत्याउन मुश्किल पर्ला तर अमेरिकामा एउटा कुकुरले आफ्नै मालिकमाथि गोली हानेको छ । घटना अनुसार अमेरिकामा एक महिला आफूले पालेको कुकुरले चलाएको गोली लागेर घाइते भएकी छिन् । इन्डाना राज्यकी २५ वर्षकी एली कार्टर आफूले पालेको कुकुरले चलाएको गोली लागेर घाइते भएकी हुन् । इन्डानाका पर्यावरण संरक्षण अधिकारी जोनथन बोयडका अनुसार संयोवश..
यी हुन् सेक्स् गर्नुका वास्तविक फाइदा
सेक्स जीवनको ठूलो आनन्द हो । मानव जीवनको अस्थित्वका लागि पनि यसको अपरिहार्य छ । सेक्स माया र सन्तान उत्पादनमा मात्र सिमित छैन । विज्ञहरुका अनुसार सेक्सले मानिसको स्वास्थ्यमा विभिन्न पक्षबाट फाइदा गर्छ । चिसोबाट जोगाउनदेखि ह्दयघातबाट बचाउनसम्म यसले मद्धत गर्छ । कम उत्तेजित हुने मानिसको आयुमा समेत असर गर्ने नयाँ तथ्य भेटिएको..
महिलाकाे वक्षस्थलसम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरू
महिलाहरूप्रति पुरूषहरू सहजै आकर्षित हुन्छन् । त्यसमा पनि महिलाको वक्षस्थल अर्थात् वक्षस्थलबाट पुरूषहरु झनै आकर्षित हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरुले गरेको अध्ययनमा प्राय पुरूषहरूको आँखा महिलाको स्तनमा पर्ने गर्छ । वक्षस्थल महिलाको सौन्दर्यको एक अभिन्न अंग नै हो यसमा दुई मत नहोला । वक्षस्थलको स्वरुपले महिलाको समग्र सुन्दरतामा प्रभाव..
बिहेपछि किन मोटाउँछन् महिला,..???
बिहेपछि किन मोटाउँछन् महिला,… दुब्लाउछन पुरुष ? जानिराखौ पुरुष मित्रहरु कुनै स्लिमस्त्रीलाई मन पारेर बिहे गर्ने फैसला गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरामा सम्झौता गर्नैपर्छ । त्यो के हो भने तपाइँले मन पारेकी स्लिम केटीको सरिर बिहेपछि पनि उस्तै स्लिम रहन्छ भन्ने पक्का हुँदैन । अर्थात् बिहेपछि कुनैपनि महिलाको सरिर भद्धा दैजान्छ पुरुष..
महिलाको व्यक्तित्व जान्ने इच्छा हरेक व्यक्तिमा हुने गर्दछ। आकृति विज्ञान एउटा यस्तो अध्ययन हो जुन शरीरको अंग तथा चालढालबाट व्यक्तित्वको परिचय दिने गर्दछ। यहाँ हामीले पनि आँखा र नाकको बनावटबाट कसरी महिलाको व्यक्तित्व जान्न सकिन्छ भन्ने विषय पस्केका छौ । आँखा: निकै चञ्चल, चमक तथा गहिरो पातलो र वरपर लालिमासहितकोआँखा, भाग्यशाली महिला..
सुत्केरीको आहारा भ्यागुता
धादिङ - शरिर दुख्यो र कमजोर भइयो भने के गर्नुहुन्छ । शहरबजारमा हुनुहुन्छ भने चिकित्सकलाई देखाएर उपर्युक्त औषधीको खोजीमा पक्कै लाग्नुहुन्छ होला । तर, धादिङका लेकाली क्षेत्रका बासिन्दा भने शरिर दुखेको र तागतिलो खानेकुराको खोजीमा लेक पस्ने गरेका छन् ।शरिर दुखेको, हातखुट्टा झमझमाउने, हड्डी टुटेफुटेको औषधी तथा तागतिलो खानेकुराको रुपमा..
महिलाले कुन कुन दिन बढी यौन सम्पर्क गर्न खोज्छन ?
महिलाहरूलाई पुरुष मिलनको रहर कुन बेला अधिक हुन्छ । एक अध्ययनका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ । यौन विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचदेखि महिनावारी पूरा भएपछि यौनका लागि उत्तेजित गर्ने हार्मोन सक्रिय हुन्छ । अनुसन्धाताहरूले त्यस अवधिमा युवतीहरूको..
वर्षको पाँच दिन लोग्ने स्वास्नीबीच कुनै सम्बन्ध नहुने गाउँ
यो दुनिया वास्तवमा संस्कृति र परम्पराको फुलवारी नै हो । पृथ्वीको विभिन्न ठाउँमा बस्ने मानिसहरुका आ आफ्ना परम्परा र संस्कृति छन् । अफ्रिकाका विभिन्न देशहरुका साथै दक्षिण पूर्वी एसियामा बस्ने परम्परागत आदिवासी समुदायका मानिसहरुका परम्परा तथा रहनसहनलाई सबैभन्दा अनौठो मानिन्छ । तर अफ्रिका वा दक्षिण पूर्वी एसियामा मात्र होइन..
श्रीमतीले पाइन्ट लगाउँदा डिभोर्स !
भारतमा सम्बन्धविच्छेदका थरिथरि घटना भारतमा सम्वन्धविच्छेदको घटना खासै धेरै हुँदैनन् । तथापि पछिल्ला वर्षहरुको यो दर तीव्ररुपमा बढिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सम्वन्धविच्छेदका लागि दिनहुँ आउने उजूरीहरुमा कतिपय निकै हास्यास्पद हुन्छन् । केही रमाइला उजूरीहरु यस्ता छन् : ‘पार्टी धेरै धाउँछे’ सन् २०११ मा एक..
हामी ‘पति-पत्नी’हौं दिपक -दिपा
लामो समयदेखि जोडी भएर काम गर्दै आएका महिला र पुरूष कलाकाका सम्बन्धमा प्रश्न गरिनु सामान्य नै हो। उत्तर दिँदा दिँदै अभ्यस्त हुनु नौलो होइन। एक समय रेडियोमा राम विलास र धनियाँ बनेर अभिनय गर्ने दिपकराज गिरी र दिपाश्री निरौलाको जोडी अहिलेसम्म कला क्षेत्रमा निरन्तर छ। दुबैले जहाँ पुगेपनि सामना गर्नैपर्ने प्रश्न नयाँ भने होइन। के तपाईहरू..
प्रेममा अनौठो बदला : श्रीमतीको बदला श्रीमती
साउन ३२ – नाताले भाइ पर्ने (फुपुको छोरा) ले श्रीमती भगाएपछि रिसले आगो भएका एक व्यक्तिले उनको पत्नीलाई भगाएर अनौठो बदला लिएका छन् । घटना हो– अमरैया टोल, खडगपुर–७ सप्तरीको । सुरुमा गाउँमा पटकपटक पञ्चायत बसी मुद्दा मिलाउन खोजिएको थियो । तर, समस्या समाधान नहुने भएपछि दुवै पक्षले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरे । अनि, घटना सार्वजनिक..
गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क गर्न हुन्छ की हुदैँन, कतिबेला गर्ने, कसरी गर्नेहोला भन्ने सबैको खुलदुुली हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यौनसम्पर्क भनेको पं्राकृतिक प्रक्रिया हो साथै गर्भधारण पनि प्राकृतिक प्रक्रिया हो त्यसैले यो दुबै प्रक्रिया सँगसँगै गईरहेको हुन्छ । यसपाली यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रह्यो भनेर कसलाई थाहा हुन्छ र, तर लगातार..
ब्रा लगाएर सुत्ने बानी छ ,त्यसाे भए अाजबाट खाेलेर सुत्नुस्
सुत्नुअघि ब्रा खोल्नैपर्ने ७ कारण जान्नुहाेस् \_ly 18, 2015 at 3:17 pm फिट र कामुक देखिन चाहने महिलाले टाइट ब्रा लगाउने गरेका छन् । तर, यस्तो ब्रा लगाएर सुत्ने गरेमा यसले उल्टो बेफाइदा गर्छ । राती ब्रा लगाउनै पर्छ भने पनि खुकुलो ब्रा लगाउने गर्नुपर्छ । १) सुत्दाखेरि ब्रा लगाउनाले रक्तसञ्चारमा कमी आउँछ । अझ टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने गर्नुभयो भने यसले..